အဝေးပြေး လမ်းပေါ်က အမည်မသိ ညီ အစ်မ(၂)ဦး နှင့် ဝပ်ရှော့ ဆရာတို့ရဲ့ လေး စားဂုဏ်ပြုဖွယ် လုပ်ရပ် – Let Pan Daily
အဝေးပြေး လမ်းပေါ်က အမည်မသိ ညီ အစ်မ(၂)ဦး နှင့် ဝပ်ရှော့ ဆရာတို့ရဲ့ လေး စားဂုဏ်ပြုဖွယ် လုပ်ရပ်
ရိုင်း ပင် ကူညီစိတ်ဓာတ်ရှိသောရေစကြို မြို့ မှ ညီအစ်မ နှစ်ယောက် နှင့်စက်ဆရာ ကိုရန်လင်းအောင် တို့၏ မွန်မြတ်သောစေတနာအားမှတ်တမ်းတင်းဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။ ?
မုံ ရွာမြို့ မှ ပုဂံ သို့ ပြန်လာ စဉ် ရေစကြိုမြို့ အဝင် အနီးအရောက်တွင် ကားစီယာတိုင်မှာ ဘယ် -ညာ ရမ်းနေသဖြင့် ကားအားခဏရပ်ပြီး အောက်သို့ဆင်းကြည့်ရာ – တော့ရှင်း – ကျိုးနေသည်ကိုတွေ့ရှိရသဖြင့် မည်သို့ဆက်လုပ်ရမည်ကိုစဉ်စာနေစဉ်အတွင် (အမည်မသိ) အမျိုးသမီး ညီအစ်အမဟုသိရ – ထိုအမျိုးသမီး
ညီအစ်မနှစ်ယောက်မှရောက်ရှိ လာ၍အကို ကားကဘာဖြစ်လို့လဲ ဘာအကူညီပေးရမလဲဟု မေးမြန်ရာ – ကျွန်တော်မှထိုအမျိုးသမီးအား အကျိုးကြောင်းပြောရာ-အမျိုးသမီး နှစ်ဦး မှ ဒါဆို ကျွန်မတို့ကားဝပ်ရှော့ဆရာ သွားခေါ်ပေးပါမည်
ခဏစောင့်ပါဟုပြောဆို၍ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ထွက်သွားရာ – များမကြာမှီ ဝပ်ရှော့ဆရာပါရှိလာပြီး ကားအောက်ပိုင်းသိုဝင်ကြည့်ရာ စက်ဆရာမှ အဆင်ပြေပါတယ် အမြန်ဆုံးလုပ်ပေးပါမည်ဟုပြောဆိုနေစဉ်အတွင်း ကျိုးနေသော#တော့ရှင်း#အားဝင်ဖြုတ်ပြီး ခဏစောင့်ပေးပါ ဂဟေ သွားဆော် လိုက်ပါအုံးမည်ဟု စက်ဆရာ မှ ထွက်သွားပြီး အချိန်မကြားခင် ကျိုးနေသောပစ္စည်းအားဂဟေ ဆော်ပြီးပြန်လာတတ်ပေးခဲ့ပါသည်
အားလုံးပြီးသည့်နှင့် အကိုစက်ဆရာဘယ်လောက်ကြပါသလဲဟု မေးမြန်ရာထိုစက်ဆရာမှ – ကျွန်တော်တို့က ခရီးသွားဧည့်ကားများအား လိုက်ပါကူညီပေးလျှက်ရှိပါသည် – ဤမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက် ကားများစက်တစ်ခုခုချွတ်ယွင်းပါက ကျွန်တော်ထံ ဆက်သွယ်၍ အကူညီတောင်းခံနိုင်ပါသည်ဟု ပြောဆိုပါသည်။
ယခုလို ရေစကြိုမြို့နယ် အတွင်းက ကားဝပ်ရှော့ဆရာ – ကိုရန်လင်းအောင်နှင့် (အမည်မသိခဲ့) အမျိုးသမီးညီအစ်မနှစ်ယောက်သည် ခရီးသွားဧည့်ကားများအားမွန်မြတ်သောစေတနာအရင်းခံဖြင့်လိုက်ပါကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှုကိုတွေ့ရှိရပါသဖြင့် – ရေစကြိုမြို့ မှ ကားဝပ်ရှော့ဆရာ – ကိုရန်လင်းအောင် နှင့် (အမည်မသိခဲ့) အမျိုးသမီးညီအစ်မနှစ်ယောက် တို့အား ကျေးဇူးဥပကာရအထူးတင်ရှိအပ်ပါကြောင်း မှတ်တမ်းဂုဏ်ပြုလိုက်ရပါသည်။
ကိုရန်လင်းအောင် – ကားဝပ်ရှော့ဆရာ ရေစ ကြိုမြို့
၀၉ – ၄၄၂၃၄၁၇၄၀
အမည်မသိခဲ့သလို – ဖုန်းနံပါတ်လဲ မသိခဲ့ရသည် အမျိုးသမီး ညီအစ်မနှစ်ယောက်၏ အထူး မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြု အပ်ပါသည်။
ဓာတ်ပုံ – ကိုဆော် (ပုဂံ)
အဝေးပွေး လမျးပျေါက အမညျမသိ ညီ အဈမ(၂)ဦး နှငျ့ ဝပျရှော့ ဆရာတို့ရဲ့ လေး စားဂုဏျပွုဖှယျ လုပျရပျ
ရိုငျး ပငျ ကူညီစိတျဓာတျရှိသောရစေကွို မွို့ မှ ညီအဈမ နှဈယောကျ နှငျ့စကျဆရာ ကိုရနျလငျးအောငျ တို့၏ မှနျမွတျသောစတေနာအားမှတျတမျးတငျးဂုဏျပွုအပျပါသညျ။ ?
မုံ ရှာမွို့ မှ ပုဂံ သို့ ပွနျလာ စဉျ ရစေကွိုမွို့ အဝငျ အနီးအရောကျတှငျ ကားစီယာတိုငျမှာ ဘယျ -ညာ ရမျးနသေဖွငျ့ ကားအားခဏရပျပွီး အောကျသို့ဆငျးကွညျ့ရာ – တော့ရှငျး – ကြိုးနသေညျကိုတှရှေိ့ရသဖွငျ့ မညျသို့ဆကျလုပျရမညျကိုစဉျစာနစေဉျအတှငျ (အမညျမသိ) အမြိုးသမီး ညီအဈအမဟုသိရ – ထိုအမြိုးသမီး
ညီအဈမနှဈယောကျမှရောကျရှိ လာ၍အကို ကားကဘာဖွဈလို့လဲ ဘာအကူညီပေးရမလဲဟု မေးမွနျရာ – ကြှနျတျောမှထိုအမြိုးသမီးအား အကြိုးကွောငျးပွောရာ-အမြိုးသမီး နှဈဦး မှ ဒါဆို ကြှနျမတို့ကားဝပျရှော့ဆရာ သှားချေါပေးပါမညျ
ခဏစောငျ့ပါဟုပွောဆို၍ဆိုငျကယျဖွငျ့ ထှကျသှားရာ – မြားမကွာမှီ ဝပျရှော့ဆရာပါရှိလာပွီး ကားအောကျပိုငျးသိုဝငျကွညျ့ရာ စကျဆရာမှ အဆငျပွပေါတယျ အမွနျဆုံးလုပျပေးပါမညျဟုပွောဆိုနစေဉျအတှငျး ကြိုးနသေော#တော့ရှငျး#အားဝငျဖွုတျပွီး ခဏစောငျ့ပေးပါ ဂဟေ သှားဆျော လိုကျပါအုံးမညျဟု စကျဆရာ မှ ထှကျသှားပွီး အခြိနျမကွားခငျ ကြိုးနသေောပစ်စညျးအားဂဟေ ဆျောပွီးပွနျလာတတျပေးခဲ့ပါသညျ
အားလုံးပွီးသညျ့နှငျ့ အကိုစကျဆရာဘယျလောကျကွပါသလဲဟု မေးမွနျရာထိုစကျဆရာမှ – ကြှနျတျောတို့က ခရီးသှားဧညျ့ကားမြားအား လိုကျပါကူညီပေးလြှကျရှိပါသညျ – ဤမွို့နယျအနီးတဈဝိုကျ ကားမြားစကျတဈခုခုခြှတျယှငျးပါက ကြှနျတျောထံ ဆကျသှယျ၍ အကူညီတောငျးခံနိုငျပါသညျဟု ပွောဆိုပါသညျ။
ယခုလို ရစေကွိုမွို့နယျ အတှငျးက ကားဝပျရှော့ဆရာ – ကိုရနျလငျးအောငျနှငျ့ (အမညျမသိခဲ့) အမြိုးသမီးညီအဈမနှဈယောကျသညျ ခရီးသှားဧညျ့ကားမြားအားမှနျမွတျသောစတေနာအရငျးခံဖွငျ့လိုကျပါကူညီဆောငျရှကျပေးမှုကိုတှရှေိ့ရပါသဖွငျ့ – ရစေကွိုမွို့ မှ ကားဝပျရှော့ဆရာ – ကိုရနျလငျးအောငျ နှငျ့ (အမညျမသိခဲ့) အမြိုးသမီးညီအဈမနှဈယောကျ တို့အား ကြေးဇူးဥပကာရအထူးတငျရှိအပျပါကွောငျး မှတျတမျးဂုဏျပွုလိုကျရပါသညျ။
ကိုရနျလငျးအောငျ – ကားဝပျရှော့ဆရာ ရစေ ကွိုမွို့
အမညျမသိခဲ့သလို – ဖုနျးနံပါတျလဲ မသိခဲ့ရသညျ အမြိုးသမီး ညီအဈမနှဈယောကျ၏ အထူး မှတျတမျးတငျ ဂုဏျပွု အပျပါသညျ။
ဓာတျပုံ – ကိုဆျော (ပုဂံ)
ကဆြုံး သှားပွီ ဖွဈလို့ ကိုယျတိုငျ မပေးနိုငျ ခဲ့တဲ့ သူမခဈြသူ ရဲ့ လကျဆောငျ ဝတျစုံလေးကို အမွတျတနိုး ဝတျဆငျ ပွီး စြာပနပှဲ ကို တကျခဲ့ရတဲ့ ကောငျမလေး
ရန်ကုန်မြို့လယ် က နာမည်ကြီး အစိုးရ အလယ်တန်းကျောင်း ရဲ့ အမှောင်ဖက်ခြမ်း
အခုလို ခေတ်ကာလ မှာ သူ့လို ရှားရှားပါးပါး လယ်သမားမျိုး ကို တန်ဖိုး ထားကြပါ